mShop - လိုချင်တာအားလုံးဝယ်နိုင်ဖို့ mShop ကိုသွားကြစို့
လက်မှာဒီဇိုင်းအလန်းနဲ့ခါးတိုအင်္ကျီလေး(ms 010
2017ဒီဇိုင်းအလန်းလေးပါ (ms 011)
3Dအင်္ကျီဒီဇိုင်းအဆန်းလေး(ms 007)
မျက်နှာကအပြုံးလေးကိုပေါ်လွင်စေမယ့်Ever Smileဒီဇီုင်းအင်္ကျီလေး(ms 008)
ကိုရီးယား ပုလဲလုံးဖော်အင်္ကျီ 2017အတွက်ဒီဇိုင်းအသစ်ပါ DL5250
ကိုးရီးယားဒီဇိုင်းသစ်Smile ပုံစံT-Shirtများ(ns a012)
T-Shirt ခေတ်မှီဆန်းသစ်လှပသောCaple ဒီဇိုင်းလေး အထူးလျှော့ဈေး(ns 037)
ဆောင်းရာသီလူငယ်ဝတ်ကိုရီးယားစတိုင်အကျီ်(ns a073)
Colourစုံboy shirtဒီဇိုင်းအသစ်လေး(ms 013)
SMART WATCH-DZ09 (အထူးလျှော့ဈေး)
Smart Box2(Mini Bluetooth Speaker) (အထူးလျှော့ဈေး)
Earphone-Kon Fu Lon(iN09)
Konfulon Earphone iN10 (၆လ အာမခံ)
Charger Cable USB S25(ip5)konfulon
Bass Earphone (LMK -032) (ယနေ့တစ်ရက်သာ အထူးလျှော့ဈေး)
(New Model capsule style ) Konfulon Power bank 10000mAH
SINGTECH i-Crystal Lite
HUAWEI Y541နားကြပ်​လက်​​ဆောင်​ အထူး​လျော့​ဈေး
Vibration Iontophoresis Instrument (အဆိပ်ထုတ်/အရေးအကြောင်းဖျောက်စက်)
Avocado Hair Mask 250g
မိန်းကလေးကကလေးလက်တိုoneset အင်္ကျ MN51
ယောက်ျားကလေးကကလေးလက်တိုoneset အင်္ကျ MN49
Min*******ein 2018/01/01 ၀ယ်ယူပြီး
E vape ဆေးလိပ်အစားထိုးစီးကရက် (Delivery Free)
သူရ********င်​ 2017/09/29 ၀ယ်ယူပြီး
Sai**** Mg 2017/08/13 ၀ယ်ယူပြီး
Xiaomi 4X (16GB , 2GB) Gold
Phy***hyo 2017/08/13 ၀ယ်ယူပြီး
True Smart Max 4.0 Two Color Combine
Aun***yaw 2017/08/13 ၀ယ်ယူပြီး
Redmi Note 4X Gold
ကို*****င်း 2017/08/12 ၀ယ်ယူပြီး
ခေတ်မှီ စွမ်းအားမြင့် ကားဖုန်စုပ်စက် (အထူးလျှော့ဈေး)
T*****r 2017/08/12 ၀ယ်ယူပြီး
3D VR BOX Remote Control (Special Discount)
b* 2017/08/11 ၀ယ်ယူပြီး
မိန်းခလေးဝတ် တီရှပ်ပါ ဘောင်းဘီ ၀မ်းဆက်-Anee-01 အဖြူစင်း L
j**n 2017/06/29 ၀ယ်ယူပြီး
n***y 2017/06/21 ၀ယ်ယူပြီး
a***y 2017/07/18 ၀ယ်ယူပြီး
099*****997 2017/07/25 ၀ယ်ယူပြီး
Full return (၀ယ်ငွေအပြည့်ပြန်အမ်းမည်)Women Formal Bag
097*****669 2017/07/24 ၀ယ်ယူပြီး
Full Return(၀ယ်ငွေအပြည့်ပြန်အမ်းမည်)ယောက်ျားလေးဝတ် T Shirt ဒီဇိုင်ဆန်းဆန်း (nanba 012) White L
099*****099 2017/07/23 ၀ယ်ယူပြီး
အစင်းဒီဇိုင်းT-Shirt လေး (ms 039) 条纹灰色 M
097*****669 2017/07/22 ၀ယ်ယူပြီး
အရိုးရှင်ဆုံးစတေကာဒီဇိုင်းလေးများ(ns a058) Black M
099*****099 2017/07/22 ၀ယ်ယူပြီး
Full Return(၀ယ်ငွေအပြည့်ပြန်အမ်းမည်)ယောက်ျားလေးဝတ် T Shirt ဒီဇိုင်ဆန်းဆန်း (nanba 012) White M
097*****598 2017/07/20 ၀ယ်ယူပြီး
Full Return (၀ယ်ငွေ အပြည့်ပြန်အမ်းမည်) စီးကရက် ဖက်လုံး 014
097*****134 2017/07/20 ၀ယ်ယူပြီး
094*****860 2017/07/04 ၀ယ်ယူပြီး
A*C 2017/06/30 ၀ယ်ယူပြီး
150*****233 2017/06/30 ၀ယ်ယူပြီး
聚* 2017/06/30 ၀ယ်ယူပြီး
phy*****zin 2017/06/10 ၀ယ်ယူပြီး
Water Spray USB Mini Fan
7*****d 2017/05/17 ၀ယ်ယူပြီး
Kylie &MAC တံဆိပ်
Aun****** Ko 2017/05/15 ၀ယ်ယူပြီး
094*****860 2017/05/14 ၀ယ်ယူပြီး
chi*****thu 2017/05/10 ၀ယ်ယူပြီး
097*****334 2017/04/23 ၀ယ်ယူပြီး
ဒီဇိုင်းသေသပ်လှပပြီးစတိုင်ကျလှပနေစေမယ့်ကိုရီးယာားဆွဲသားဘောင်ဘီများ(ns a082) Black M
Ko ****ove 2017/04/11 ၀ယ်ယူပြီး
094*****810 2017/03/23 ၀ယ်ယူပြီး
150*****233 2017/03/17 ၀ယ်ယူပြီး
094*****132 2017/03/15 ၀ယ်ယူပြီး
Aun******arn 2017/03/13 ၀ယ်ယူပြီး
094*****798 2017/03/10 ၀ယ်ယူပြီး
097*****325 2017/03/09 ၀ယ်ယူပြီး
099*****283 2017/03/09 ၀ယ်ယူပြီး
092*****455 2017/03/06 ၀ယ်ယူပြီး
ငြိ******မ်း 2017/03/03 ၀ယ်ယူပြီး
MAC တံဆိပ် နှစ်ထပ်ပေါင်ဒါ်
092*****874 2017/03/01 ၀ယ်ယူပြီး
092*****874 2017/02/24 ၀ယ်ယူပြီး
097*****043 2017/02/22 ၀ယ်ယူပြီး
ဆွဲသား ရိုးရိုး. Girls Fashion.Made in Bangkok
နန်************မ်း 2017/02/19 ၀ယ်ယူပြီး
အေး*****ုင် 2017/02/14 ၀ယ်ယူပြီး
097*****525 2017/02/14 ၀ယ်ယူပြီး
094*****096 2017/02/13 ၀ယ်ယူပြီး
အေး*****ုင် 2017/02/12 ၀ယ်ယူပြီး
အေး*****ုင် 2017/02/11 ၀ယ်ယူပြီး
အေး*****ုင် 2017/02/07 ၀ယ်ယူပြီး
concelar & makeup 2in1 CC
097*****158 2017/02/04 ၀ယ်ယူပြီး
099*****273 2017/02/03 ၀ယ်ယူပြီး
ဆော******** KO 2017/02/02 ၀ယ်ယူပြီး
ချည်​​ပေါင်းသားစစ်​စစ်​. နန်းဆန်​ဆန်​ အင်​ကျီ. Made in Myanmar
097*****821 2017/01/30 ၀ယ်ယူပြီး
092*****434 2017/01/30 ၀ယ်ယူပြီး
wireless stero bluetooth headphone
094*****922 2017/01/27 ၀ယ်ယူပြီး
ဖုန်း​ဘေ ၅၀၀ ,၁၀၀၀ ,၃၀၀၀ ,၅၀၀၀ ,၁၀၀၀၀ ရရှိမည့်​ကံစမ်းမဲကြီးဖြစ်​ပါတယ်​
jun***une 2017/01/26 ၀ယ်ယူပြီး
099**************e L 2017/01/25 ၀ယ်ယူပြီး
099**************e L 2017/01/22 ၀ယ်ယူပြီး
2017 New Year အထူျးလျှာဈေး
R**I 2017/01/13 ၀ယ်ယူပြီး
စို*********ျစ် 2016/12/20 ၀ယ်ယူပြီး
094*****422 2016/12/19 ၀ယ်ယူပြီး
094*****571 2016/12/06 ၀ယ်ယူပြီး
097*****413 2016/12/05 ၀ယ်ယူပြီး
စိန***ါ်သံ 2016/12/03 ၀ယ်ယူပြီး
ပ​လေးစတိုးကတ်​ (10 $)
097*****102 2016/10/17 ၀ယ်ယူပြီး
1000 top up အား0ကျပ်နှင့်ဝယ်မည်
097*****773 2016/10/15 ၀ယ်ယူပြီး
ku **************723 2016/10/04 ၀ယ်ယူပြီး
GENAI J10 power bank (အထူး​လျော့​ဈေး)
092*****089 2016/09/27 ၀ယ်ယူပြီး
l******y 2016/09/12 ၀ယ်ယူပြီး
ku **************723 2016/09/08 ၀ယ်ယူပြီး
097*****002 2016/09/08 ၀ယ်ယူပြီး
094*****596 2016/09/04 ၀ယ်ယူပြီး
Snail White (Moisture facial cream) (​သေး)
ku **************723 2016/09/04 ၀ယ်ယူပြီး
aun**********ank 2016/08/29 ၀ယ်ယူပြီး
097*****834 2016/08/25 ၀ယ်ယူပြီး
ေ****း 2016/08/17 ၀ယ်ယူပြီး
Huawei P8(Lite) (လက်ဆောင် ၅မျိုး+၁ နှစ်အာမခံ)
097*****968 2016/08/16 ၀ယ်ယူပြီး
094*****686 2016/08/13 ၀ယ်ယူပြီး
097*****719 2016/08/12 ၀ယ်ယူပြီး
ကိုရီးယားစတိုင် Tshirt ဂါဝန်လေး(YQ6106)
d***s 2016/08/08 ၀ယ်ယူပြီး
nay******hyo 2016/08/07 ၀ယ်ယူပြီး
097*****276 2016/08/06 ၀ယ်ယူပြီး
094*****858 2016/08/04 ၀ယ်ယူပြီး
Balance Wheel 6.5
3G Sim Router with Power Bank
092*****793 2016/07/30 ၀ယ်ယူပြီး
097*****160 2016/07/20 ၀ယ်ယူပြီး
092*****620 2016/07/19 ၀ယ်ယူပြီး
092*****319 2016/07/19 ၀ယ်ယူပြီး
092*****447 2016/07/17 ၀ယ်ယူပြီး
099*****828 2016/07/17 ၀ယ်ယူပြီး
094*****220 2016/07/16 ၀ယ်ယူပြီး
097*****125 2016/07/14 ၀ယ်ယူပြီး
097*****894 2016/07/13 ၀ယ်ယူပြီး
Ray**************းမည 2016/07/12 ၀ယ်ယူပြီး
GMail. & facebook လုပ်​​ပေမည်​
z***r 2016/07/03 ၀ယ်ယူပြီး
099*****837 2016/07/03 ၀ယ်ယူပြီး
097*****166 2016/07/02 ၀ယ်ယူပြီး
097*****129 2016/06/25 ၀ယ်ယူပြီး
094*****581 2016/06/24 ၀ယ်ယူပြီး
မျိ******င်​ 2016/06/21 ၀ယ်ယူပြီး
PHONE ရောင်းမည်။ P 9
094*****524 2016/06/21 ၀ယ်ယူပြီး
097*****926 2016/06/21 ၀ယ်ယူပြီး
099*****505 2016/06/20 ၀ယ်ယူပြီး
094*****400 2016/06/20 ၀ယ်ယူပြီး
094*****240 2016/06/19 ၀ယ်ယူပြီး
094*****184 2016/06/19 ၀ယ်ယူပြီး
Samsumg SD 8Gb
097*****553 2016/06/19 ၀ယ်ယူပြီး
097*****002 2016/06/19 ၀ယ်ယူပြီး
099*****347 2016/06/19 ၀ယ်ယူပြီး
ALL STAR MEN SHIRT
097*****650 2016/06/18 ၀ယ်ယူပြီး
097*****525 2016/06/17 ၀ယ်ယူပြီး
hei*****tet 2016/06/17 ၀ယ်ယူပြီး
094*****220 2016/06/17 ၀ယ်ယူပြီး
097*****968 2016/06/16 ၀ယ်ယူပြီး
ခေတ်စတိုင်များစွာ ကို ပြုပြင်ပြောင်းလည်းပေးနေပါသည်
SP 8 GB(Lifetime Warrenty)
092*****259 2016/06/16 ၀ယ်ယူပြီး
ဖုန်း​ငွေဖြည့်​ကဒ်​ လက်​​ဆောင်​ ၃၀၀၀ တန် နစ်​နာမှုမရှိ အမြတ်​ပဲရှိ
092*****411 2016/06/15 ၀ယ်ယူပြီး
ဖုန်း​ဘေ ၃၀၀၀ ၂၄နာရီအတွင်း ​အောက်​ပါအချက်​များလိုက်​နာပါက သင်ဖုန်း​ဘေ ၃၀၀၀ ရပါမည်​။
097*****502 2016/06/15 ၀ယ်ယူပြီး
097*****053 2016/06/15 ၀ယ်ယူပြီး
092*****781 2016/06/13 ၀ယ်ယူပြီး
097*****968 2016/06/12 ၀ယ်ယူပြီး
097*****848 2016/06/12 ၀ယ်ယူပြီး
092*****883 2016/06/12 ၀ယ်ယူပြီး
097*****436 2016/06/12 ၀ယ်ယူပြီး
099*****366 2016/06/12 ၀ယ်ယူပြီး
လ******း 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
097*****705 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
092*****828 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
099*****864 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
099*****240 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
092*****991 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
092*****289 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
094*****922 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
092*****883 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
092*****135 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
$ထာ***********ယေး 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
094*****405 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
Oh My Godfather
Ray**************းမည 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
cod****830 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
092*****004 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
092*****428 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
092*****933 2016/06/11 ၀ယ်ယူပြီး
K*****T 2016/06/10 ၀ယ်ယူပြီး
094*****189 2016/06/10 ၀ယ်ယူပြီး
094*****146 2016/06/10 ၀ယ်ယူပြီး
099*****696 2016/06/10 ၀ယ်ယူပြီး
092*****346 2016/06/09 ၀ယ်ယူပြီး
097*****230 2016/06/09 ၀ယ်ယူပြီး
092*****640 2016/06/09 ၀ယ်ယူပြီး
099*****911 2016/06/09 ၀ယ်ယူပြီး
094*****004 2016/06/09 ၀ယ်ယူပြီး
097*****071 2016/06/09 ၀ယ်ယူပြီး
099*****999 2016/06/09 ၀ယ်ယူပြီး
092*****523 2016/06/08 ၀ယ်ယူပြီး
အမြ**************အကု 2016/06/08 ၀ယ်ယူပြီး
Gen*******ndy 2016/06/08 ၀ယ်ယူပြီး
Gen*******ndy 2016/06/07 ၀ယ်ယူပြီး
097*****049 2016/06/07 ၀ယ်ယူပြီး
094*****484 2016/06/07 ၀ယ်ယူပြီး
099*****864 2016/06/06 ၀ယ်ယူပြီး
094*****012 2016/06/05 ၀ယ်ယူပြီး
Van***eal 2016/06/05 ၀ယ်ယူပြီး
094*****654 2016/06/05 ၀ယ်ယူပြီး
099*****709 2016/06/04 ၀ယ်ယူပြီး
097*****894 2016/06/04 ၀ယ်ယူပြီး
092*****633 2016/06/04 ၀ယ်ယူပြီး
097*****918 2016/06/03 ၀ယ်ယူပြီး
G***A 2016/04/26 ၀ယ်ယူပြီး
Fashion Net Mandalay
G***A 2016/04/21 ၀ယ်ယူပြီး
6F Mother love